China Steel waya tambo simbi tambo simbi waya tambo tambo ine faibha musimboti 6×7+FC 6×19+FC 6×12+FC fekitari uye vagadziri |Bangyi
Galvanized Steel Wire Tambo
Zvimwe Zvigadzirwa zveFitness
Kuburitswa kwechigadzirwa chitsva
Simbi waya tambo simbi tambo simbi waya tambo tambo ine faibha musimboti 6×7+FC 6×19+FC 6×12+FC
Fiber Core simbi waya tambo inoumbwa ne fiber core pakati pesimbi waya tambo.Inomiririrwa neFC.Kuenzaniswa nesimbi yepakati simbi waya tambo, faibha musimboti simbi waya tambo ine hunhu hwekupfava, kusaita ngura uye mamwe mafuta ekuchengetedza.Kune marudzi maviri eFiber core
FOB Mutengo:US $0.05 - 0.25 / Meter
Min.Order Quantity:10000 Mamita
Supply Ability:100000 Mamita Pavhiki
Package:coil, reel yemapuranga, reel yepurasitiki, iron reel, pp bag
Fiber Core simbi waya tambo inoumbwa ne fiber core pakati pesimbi waya tambo.Inomiririrwa neFC.
Kuenzaniswa nesimbi yepakati simbi waya tambo, faibha musimboti simbi waya tambo ine hunhu hwekupfava, kusaita ngura uye mamwe mafuta ekuchengetedza.
Kune marudzi maviri eFiber core: Natural fiber core uye Synthetic fiber core.
Natural core simbi waya tambo dzinoshandisa natural faibha tambo cores dzakadai jute, sisal, etc. Rudzi urwu rwetambo core rine mafuta akawanda ekuchengetedza, tambo yesimbi yakapfava uye haigoni kumira pakuora;
Synthetic core steel waya tambo ifayibha musimboti wakagadzirwa nemakemikari ekugadzira zvinhu, senge polyethylene, polypropylene, naironi, etc. Rudzi urwu rwetambo core harina mafuta ekuchengetedza mashoma, uye tambo yesimbi yakaoma uye isingaite ngura.
Ndeupi musiyano uripo pakati pesimbi core uye fiber core
1. Iyo simbi yepakati tambo tambo yedhayamita imwechete ine simba rakakura rekupwanya kupfuura fiber core tambo tambo, uye mutoro wainotakura wakakurawo;
2. Iyo simbi yepakati waya tambo ine zvirinani kukanganisa kupikisa uye kudzvinyirira kuramba pane fiber core waya tambo.Iyo simbi yesimbi tambo tambo yakakodzera kune akawanda-layer winding;
3. Steel core tambo tambo yakakwirira kudarika fiber core waya tambo maererano nekukwirira kwekushisa.Simbi yepakati waya tambo inowanzosarudzwa kune yakakwirira tembiricha nguva;
4. Iyo fiber core tambo tambo yakapfava kupfuura simbi yepakati waya tambo;
5. Kuzora kwefiber-core simbi waya tambo kuri nani pane simbi-core simbi waya tambo yekuchengetera mafuta.
Zita Simbi waya tambo ine Fiber Core
Diameter 0.3-12mm, nezvimwewo
Kuvaka 6*7+FC,6*19+FC, nezvimwewo.
Urefu 500mm/reel,1000mm/reel,2000mm/reel,kana sezvinodiwa zvako
Material Carbon simbi, hemp musimboti/donje musimboti/PP musimboti
tensile simba 1470,1570,1670,1770,1870,1960,2160MPA
Kurapa kwepamusoro Electro-galvanizing, kana kupisa-dip galvanizing
B / L Muchinjikwa
Zvakapfuura: Stainless Steel Wire Rope2
Zvinotevera: Plastic coated steel waya tambo
China Galvanized Steel Rope
China Galvanized Steel Strand
China Kugadzira Galvanized Steel Wire Rope
Yakanyikwa Marata 6*19+Fc Steel Wire Tambo
Electro Galvanized Steel Wire Rope
Kupisa Dip Galvanized Wire Rope
Pvc Yakaputirwa Nesimbi Wire Rope
Steel Wire Tambo Yakagadzirwa
Wholesale Galvanized Steel Cable
1*7 1*19 7*7 7*19 Simbi tambo tambo simbi waya c...
Galvanized simbi waya tambo Steel Core 6*7+IWS 6...
19 × 7 yakakwirira tensile simbi waya waya galvani ...
Galvanized simbi waya tambo Fiber musimboti / simbi Core
7*7 Brake tambo Mudhudhudhu Kudzora tambo galva...
6*37+FC inosimudza galvanized simbi waya tambo
Kero: Xujiadaokou Village Shuiwan Town, Wudi County, Binzhou City, Shandong Province
© Copyright 20102021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.
svetuka tambo tenga, nyanzvi yekusvetuka tambo, kugwinya kusvetuka tambo, kusvetuka tambo akachenjera, tambo yokusvetuka isina tambo, bata kusvetuka tambo,